Sherlock (2010) Season3Complete – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
3 Seasons3Episodes
StarringAmanda Abbington, Andrew Scott, Benedict Cumberbatch, Louise Brealey, Mark Gatiss, Martin Freeman, Rupert Graves, Una Stubbs
Synopsis of Sherlock (2010) Season3Complete
Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) ရဲ့ Sherlock အဖွဈသရုပျဆောငျတဲ့ Series လေးကိုမကွညျ့ဖူးရငျတောငျကွားဖူးမယျထငျပါတယျ။ သူရဲ့သရုပျဆောငျကောငျးခကျြတှရေယျ ဇာတျလမျးဇာတျအိမျကောငျးခကျြတှအေရ imdb 9.1 ကို လူပေါငျး ၈သိနျးကြျော Vote ပီးရထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ. မကွညျ့ရသေးတဲ့သူတှကေော ကွညျ့ပီးပီမမှတျမိတော့တဲ့သူတှအေတှကျကော ကွညျကွညျ့လငျလငျလေးပွနျကွညျခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ ဘာသာပွနျပီး Channel M-Sub ကနတေငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) ရဲ့ Sherlock အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ Series လေးကိုမကြည့်ဖူးရင်တောင်ကြားဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ သူရဲ့သရုပ်ဆောင်ကောင်းချက်တွေရယ် ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကောင်းချက်တွေအရ imdb 9.1 ကို လူပေါင်း ၈သိန်းကျော် Vote ပီးရထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေကော ကြည့်ပီးပီမမှတ်မိတော့တဲ့သူတွေအတွက်ကော ကြည်ကြည့်လင်လင်လေးပြန်ကြည်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ဘာသာပြန်ပီး Channel M-Sub ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Firt air date2010-07-25
Home PageSherlock (2010) Season3Complete
Sex Education (2019) Season2Complete
Hospital Playlist (2020) Season 1 Complete